I-LibreCAD, ekugqibeleni siya kuba ne-CAD yasimahla-iGeofumadas
Ikhaya/AutoCAD-AutoDesk/I-LibreCAD, ekugqibeleni siya kuba ne-CAD yamahhala
Ndifuna ukuqala ngokuchaza ukuba ayifani nokuthi i-CAD yasimahla kune-CAD yasimahla kodwa omabini la magama ngawona akhangelo kuGoogle ahambelana negama elithi CAD. Kuxhomekeka kuhlobo lomsebenzisi, umsebenzisi osisiseko wokuzoba uya kucinga ngokufumaneka kwayo ngaphandle kokwenza intlawulo yelayisensi okanye ukulingwa kobugqwetha yiyo loo nto ibizwa ngokuba yi-CAD yasimahla; Umsebenzisi wamandla okanye umphuhlisi ujonge kwiLibreCAD yenkululeko enayo yokwandisa amandla ayo.
Kwaye inguqulelo yokuqala ezinzileyo yeLibreCAD sele ikhutshiwe kutshanje. Yenye yeyokuqala apho sinolindelo oluninzi olubone uMthombo oVulekileyo njengemodeli yeshishini eya kuthi yaphule iiparadigms ezininzi ngendlela ulwazi olulawulwa ngayo. Ngapha koko, kweminye imimandla enje ngeqonga lokushicilela iwebhu kunye neeNkqubo zoLwazi lweJografi, isoftware yasimahla yenze inkqubela phambili ebaluleke kakhulu, idlula nezixhobo zokuthengisa ezinamagama athandwayo, kodwa isiseko seCAD (ngaphandle kweBlender elungileyo kodwa uyilo loomatshini. Okwangoku asikaboni nto ininzi.
Uphuhliso lusebenzisa kwakhona amanye amathala eencwadi Qcad, Ndathetha Of apho ixesha eyadlulayo, kodwa emva iingxaki ezahlukeneyo uhlobo mvume kunye amanye amalungelo, iye phantse yakhiwa ukusuka ekuqaleni, ukuthatha nje uncedo yokusebenza enxibe ezinye iinzame njengoko projekthi wabizwa CADuntu.
Ukuza kuthi ga ngoku, isenguhlobo olusisiseko, nangona kunjalo indlela ekuyiyo kunye nolwamkelo eluntwini, ndinobuganga bokukholelwa ukuba kwisithuba seminyaka emithathu ekugqibeleni siya kuba nesixhobo seCAD esikhuphisana nesoftware edumileyo. Njengoko idityanisiwe kwindalo yendalo, iLibreCAD iya kuba nakho ukuphumeza impumelelo enkulu kubume be-GIS kuba izinto ezininzi kusafuneka zenziwe kwicala lesimbo seCAD. umgca / u-trim / snap
Iyiphi inkqubela eyenziwa yi-LibreCAD?
Okwangoku, ukusebenziseka kweLibreCAD kujongeka kusebenza kakhulu. Uyilo lojongano lomsebenzisi luyasebenza, kunye neepaneli ezinokuhlengahlengiswa.
Ulawulo locwangco lusebenza ngokwenene, olufana nelokusetyenzana okanye Imephu, kunye nokucima, ngokucofa kanye. Kwiphaneli esezantsi isithuba semiyalelo yomgca kwisitayile se-AutoCAD, nangona ukhetho lomxholo lukwibha ethe tyaba enokuthi ibe phezulu ngokungagqibekanga okanye ijikeleze naphi na. Le mifanekiso ilandelayo ibonisa ukuba yayiyintoni i-QCad interface kunye nendlela efanayo egcinwe ngayo kwiLibreCAD.
Ndiyayithanda ingqiqo yokuhamba komyalelo weLibreCAD, ukuthintela imivalo emininzi ethintela indawo yokusebenza. Iphaneli yasekhohlo ayisiyiyo iphaneli yomyalelo kodwa imenyu yokuyalela, efanayo neMicrostation. Ukwenza umzekelo:
Umyalelo welayini ukhethwe
Oku kubangela ukuba iimpawu zitshintshwe yindlela yokukhetha (ukusuka kumagqabini amabini, ukusuka kwinqanaba (ray), bhisikidi, i-tangent, njl.
Kwaye xa ukhetha uhlobo lomgca, ukhetho lwe i-snap
Kwakhona kwipaneli efanayo unokusebenzisa amamenyu angasetyenziswanga ukukhuphela kwi-bar phezulu, njengemiyalelo yokuguqula, ukukhangela, ukukhetha okanye ulwazi lomyalelo.
Kucacile ukuba yindlela ebonakalayo yokuhamba kakuhle, kuba kwezinye iimeko kufuneka udide ngeenxa yesikrini ukwenza umgca nge-snap ethile.
Kwakhona kuyasebenza, ukuba njengeMicstation, umyalelo osetyenziswayo awufi, ngaphandle kokuba enye isetyenziswe.
Ifana ne-AutoCAD, iyayamkela imiyalelo yokubhaliweyo, enegama elifanayo kunye nezifinyezo. Umzekelo, umgca ungabhalwa: Umgca, L, ln; Ukufana kungabhalwa okanye, kulungiswe, kube kuthelekiswa.
Kuyinto enokwenza, ukuba ungayilungisa ulwimi kubo bobabini umsebenzisi kunye nemiyalelo, ekhethiweyo Hlela> ukhetho lwesicelo.
I-autoguardado, kwaye ingaqwalasela ukuba kwenzeka kaninzi kangakanani.
Uninzi lwezinto ezintsha zeLibreCAD zikwi-interface, nangona kukho imiyalelo enomdla, njengokukhetha zonke izinto ezikwinqanaba, kwaye kuya kuba yimfuneko ukubona ukuba bakho na abanye abantu abenza izinto ezintsha. Kwaye nangona isisombululo sasimahla kufanele ukuba siyile kwakhona indlela yokwenza izinto, ngokubanzi banike ingqalelo kwimithetho esetyenziswa kakhulu ziinkqubo zobunini, apha ngezantsi ndidwelise uthelekiso lwazo ngoku ngokubhekisele kwezo bendizisebenzisa xa ndinika Inkqubo ye-AutoCAD ngokusekwe kuma-32 aqhelekileyo ekuzobeni izicwangciso zokwakha. Nangona kukho i-RC entsha, ndisebenzisa i-1.0 ezinzileyo yakutshanje ukusuka nge-15 kaDisemba ngo-2011.
1 Umgca Si Xa usebenza kwimenyu yomgca, ukhetho olunjenge:
-kota ukusuka kumabini amabini
-Kuqala ukususela kunye nokuqala
Umgca ochanekileyo, umgca ongezantsi
2 I-Poly line Si Ukukhetha umyalelo kusebenze ukhetho lokuhlela i-polyline, njengokungeza okanye ukususa amanqaku okanye ukucoca amanqaku.
3 Isangqa Si -Ingongoma yendawo
- I-Radio Centre
4 Umda Hayi Mhlawumbi inokuyenza ngomyalelo wokuqhawula
5 block Si Imenyu ifaka iimpawu zokuqamba kabusha, ukulungisa kwakhona, ukuhlela, ukungena okanye ukufaka
6 Hlela Hayi
7 Trim Si Kukho ukhetho lwe-trim emigqeni emibini, efana nento esenza ngayo ngefayile ye-radio.
8 Khuphela Si
9 Hambisa Si Umyalelo wokuhambisa ukopi kwaye ujikeleze imiyalelo, kwimilo efana ne-lisp eyaziwayo mocoro
10 Jikela Si
11 U kunyuka Si
13 Hlela iifom Si
14 ukuxhaphaza Si
16 IArch Si -Ingcingo, indawo, iingongoma.
17 Polygon Si -Kusuka kwiziko
-Ukuvela kwicala elinye
19 Zikho Hayi Akukho ncediso yezinto ezifakwe kwizinto ezizinzile
21 Tyala Si
22 ikhefu Si Umyalelo ubizwa ngokuba ulwahlula, nxalenye yomgca kwindawo ethile
23 Multiline Hayi
24 Xline Hayi
26 Faka iBlock Si
27 Umbhalo Si Unako ukuxubha umbhalo ngokubhaliweyo, okwenziwe ngepaneli yeempawu zobhalo kunye nokufakwa kwesimboli esivamile njengobuninzi, i-arroba, i-degrees, njl.
28 E fanayo Si
29 Ukwandisa Hayi Kubonakala ukuba inokwenziwa ngolu lulwayo okanye i-trim yamigca emibini
30 Yandisa Si
31 Ifayile Si
32 Cima Si Kukho umehluko wemithetho phakathi kokususa nokususa into ekhethiweyo
Mncinci ndiza kuthetha ngokulinganiselwa, kuba le projekthi isisa.
Okwangoku ujongano luyacotha kwaye imouse ayinazinto zininzi zisebenzayo xa ukhetha izinto kunye neqhosha lasekunene le mouse. Izinketho ze-snap zamkelekile okanye zingaphantsi kodwa ukusebenza kokubamba kusabonakala kukubi. Ixhasa kuphela umsebenzi we-2D, kwixesha elifutshane baya kuyiphumeza ngokuqinisekileyo i-isometric njengoko yenzayo i-qCAD. Akukho kuphathwa kwezakhiwo, esele zikhona kumzobo zibonwa njengeebhloko ezifakwe kwifayile nangona zingenakubonwa, ushicilelo lubi kakhulu.
Kucacile ukuba, ngenxa yokutsha, akukho ncwadana.
Ikwaxhasa kuphela iifayile ze-dxf kwiifom ze-2000, ngoko silindele inkxaso ye-DNG2000.
Kuya kukhula nje ngokuba zibeka phambili kwiluhlu lwesifiso, kuyo kuluntu iya kudlala indima ebalulekileyo.
Umngeni omkhulu kwi-LibreCAD
Ukunyaniseka, andiyi kubona ubunzima ekufumaneni ukuba kusetyenziswe isikhombisi sokusebenza ngokufanelekileyo kunye nokusetyenziswa kakuhle kobutyebi beqela.
Ngokoluvo lwam, owona mceli mngeni mkhulu kukufumana iifayile ze-dwg / dgn. Ngelixa phantse nayiphi na inkqubo enexabiso eliphantsi, efana naleyo ikumgca we-IntelliCAD, Globalmapper, ITatukGIS yenza, iiprogram ezivuthiwe kakhulu QGIS y GvSIG abakwazanga ukuvula umnyango wesivumelwano. Kubonakala ngathi iingcango azisoloko zivulelekile kumanyathelo asimahla. Kwimeko yeeNkqubo zeBentley, kuya kufuneka ukuba kwenziwe ilinge Vula iNdibaniso yoBumbe kwaye ujongane nefomathi yeV8 kwaye I-imodeli esiyakholwayo iya kuba malunga ne-10 iminyaka emininzi, kwimeko ye-AutoCAD iyanzima kakhulu kuba emva kokuba wonke umntu akwazi ukuvula (dwg2000) kukho ubuncinane amafomathi amasha amane kuquka AutoCAD 2013.
Kwakhona Kunzima ukucinga malunga scalability, ukususela namhlanje sithetha kumda wesangqa lixesha, ikamva CAD na modeling (BIM), yaye ndizele oku LibreCAD iya kuba ngumthwalo onzima ukuba siqwalasela ukuba iminikelo uninzi yokuzithandela .
Olunye ucelomngeni ngumgangatho wokugcina, oya kuwufumanisa ngokuqinisekileyo njengoko ube ngamazwe ngamazwe.
Kuba ngoku ndifumana ingqiqo efanelekileyo, yintoni inkqubo eqhubayo ye-12 MB nje.
Iiphene ezinzulu xa uzama ukwahlula isangqa phakathi kwemigca emibini njengoko kwenziwa kwiphonsi yokufundisa kwiphubhu. Andikwazi kwaye ndenza oku iiyure. Ngaba ukopela le vidiyo? Ngaba yinkqubo yam? Unokundinceda? t
Enkosi kakhulu ngegalelo, njengoko ndimtsha koku ndingatsho ukuba ujongano lunomdla kakhulu, ngethemba ukuba iibhloko ezikwi-dwg zinokukhutshelwa kwaye zijongwe kungekudala.
Monchito Ponce uthi:
umnikelo ogqwesileyo ...
Ndiyabona ukuba kuvumela ukungenisa iifayile zefom yefayile, nangona andizange ndikwazi ukubona izinto ezivezwe kwiimvavanyo endenzileyo.